सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न दिने निर्णय – Pradesh Network
सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न दिने निर्णय
Posted on July 9, 2020 Author pradeshnetwork	Comment(0)
विराटनगर, २५ असार । सरकारले सबै खालका सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन भोलीबाट संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषदको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता संचारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक सवारीसाधन संचालन गर्न दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाभित्र र अन्य जिल्लाहरुको हकमा जिल्लाभित्र मात्रै संचालन गर्न पाइनेछ ।
अन्तर जिल्ला र लामो दुरीका सवारीसाधन भने संचालन गर्न पाइने छैन । एउटा जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा जानका लागि रोक लगाइनेछ । तर निजी सवारीसाधनलाई भने जोरविजोर कायम नै राखिएको छ ।
उहाँका अनुसार चालक सहित दुई जना र परिवारकै पाँच बर्ष मुनिको काखमा राख्न मिल्ने बच्चा भने राख्न पाइनेछ । मोटरसाइकल भने दुई जना चढाउन पाइनेछ । परिवारकै पाँच बर्ष मुनिका बच्चा भए राख्न पाइनेछ ।
त्यसै गरि ट्याक्सी संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्र र सम्वन्धित जिल्लाभित्र संचालन गर्न पाइनेछ । चालक बाहेक २ जना यात्रु र ती यात्रुका परिवार पाँच बर्ष मुनिका बच्चा बाहेक अरु राख्न दिइनेछ ।
विराटनगर, २७ असार । काठमाडौंका २ सहित नेपालमा कोरोनाबाट थप ३ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं ठेगाना भएका २ र सिन्धुपाल्चोकका एक पुरुषको मृत्यु भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका १० संखमुलका ६० वर्षका पुरुषको असार २६ गते मृत्यु भएको हो । यस्तै काठमाडौंकै […]
नेपालमा कोरोनाका कारण १८ जनाको मृत्यु
Posted on June 13, 2020 Author pradeshnetwork
विराटनगर, ३१ जेठ । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप २ जनाको मृत्यु भएको स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेशवर गौतमले थप २ जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको बताउनुभयो । उहाँले जेठ २८ गते पर्सा जिल्ला विरगंज महनगरपालिका घण्टाघर नजिक अन्दाजी […]
आज नेपालमा थप ११७० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण, संक्रमितको संख्या ५५,३२९ पुग्यो
Posted on September 14, 2020 Author nikhil
सप्तरी- पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप ११७० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। २४ घन्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुने को संख्या ५५ हजार ३२९ जना पुगेको छ। पछिल्लो २४ […]